Swirl: Sehatra fivarotana finday anaty fivarotana ho an'ny mpivarotra lehibe | Martech Zone
Sabotsy 2 Novambra 2013 Sabotsy 2 Novambra 2013 Douglas Karr
mikoropadropaka anatin'ny In-Store Mobile Marketing Platform ™ no sehatra voalohany avelan'ny mpivarotra ambongadiny hamorona sy hanome atiny manokana sy tolotra ho an'ireo mpiantsena miorina amin'ny toerana manokana misy azy ireo ao amin'ny magazay fivarotana lehibe. Ny sehatra Swirl dia manolotra vahaolana farany ho an'ny mpivarotra mba hitantanana fampielezan-kevitra mahomby izay mifandray amin'ny mpanjifany amin'ny alàlan'ny fitaovan'ny findainy na aiza na aiza manomboka amin'ny haavon'ny manodidina, hatrany amin'ny faritra manokana amin'ny magazay.
Tamin'ny volana Mey, Swirl dia nanangana programa mpanamory fiaramanidina miaraka amin'ireo mpivarotra lamaody nasionaly ao anatin'izany i Alex sy Ani, Kenneth Cole, ary Timberland izay naneho ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny fifanakalozana varotra, ary mbola tsy nisy toy izany 75 isan-jato ny tahan'ny fisokafan'ny app in-store.
Nahita valiny tena mahavariana avy amin'ireo mpanamory fiaramanidina Swirl izahay nihazakazaka tany amin'ny fivarotanay nandritra ny fahavaratra. Ankafizin'ny mpanjifa ny fahazoana tolotra finday manokana ho an'ny mpivarotra; mazava tsara fa fomba tsara hifandraisantsika amin'ny mpanjifa nomerika ankehitriny. Miorina amin'ny efa hitantsika hatreto, manantena ny hanitatra ny fampiasana ny haitao marketing any Swirl any amin'ny toerana hafa any Timberland izahay amin'ny taona 2014. Ryan Shadrin, filoha lefitra amin'ny varotra sy e-varotra ho an'ny Timberland.
Ny Swirl In-Store Mobile Marketing Platform dia manambatra ny tanjona kendrena amin'ny toerana misy ny mpivarotra sy ny rindranasa rehetra mba handefasana hafatra, atiny ary tolotra ilaina amin'ny mpanjifa - rehefa miantsena izy ireo. Powered by Bluetooth® Low Energy positioning beacons, Swirl dia afaka mamaritra ny toerana marim-pototry ny mpivarotra ao anaty magazay, toy ny làlan-jaza na departemanta elektronika, amin'ny fotoana tena izy ary mandefa hafatra, atiny ary tolotra tena misy ifandraisany.
Ny sehatra Swirl dia misy
Swirl SecureCast ™ Beacons - Fanamafisam-peo miorina amin'ny bateria Bluetooth® Low Energy ao anaty bateria izay mametraka minitra vitsy, miasa manerana ny telefaona Apple sy Android, ary manamarina avy hatrany ny toerana misy ny mpivarotra nisafidy ny fampiharana an'ny mpivarotra. Ireo fitaovana SecureCast dia azo alamina na mifanentana tanteraka, misokatra Apple iBeacons na, ho an'ireo mpivarotra enta-mavesatra mifandraika amin'ny angon-drakitra sy ny tsiambaratelon'ny mpanjifa, dia azo arovana amin'ny alàlan'ny haitao fanalahidy sy fiarovana an'i Swirl.
Swirl Mobile Client Software Development Kit (SDK) - Ahafahan'ireo mpivarotra mametraka ny haitao Swirl ho mora amina rindranasa fivarotany marika manokana, ao anatin'izany ny fahafaha-miasa amin'ny mpiantsena amin'ny atiny voafintina sy voafaritra manokana mifototra amin'ny toerana bitika anatiny izay voafaritry ny fanilo SecureCast. Ny traikefa finday mitovy amin'ny fivarotana ihany koa dia azo ampiana amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo hanitarana ny fanatonan'ny mpihaino sy hitondrana fivezivezena an-tongotra fanampiny amin'ny fivarotana antsinjarany.
Console Swirl Marketing - Fitaovana feno marketing ho an'ny tena-miasa ho an'ny fitantanana fampielezan-kevitra amin'ny finday sy Analytics, mamela ireo mpivarotra amoron-dàlana hamorona mora foana ny traikefa amin'ny doka finday miroboka izay mandeha ho azy rehefa miantsena ao amin'ny magazay ny mpanjifa. Ny ekipa mpivarotra dia afaka manatanteraka fampielezan-kevitra amin'ny fivarotana an'arivony maro miaraka amin'ny fisorohana ny fiarovana sy ny fitantanana ny fizotran'ny asa. Ny console izay miorina amin'ny rahona dia misy koa fahaiza-mitantana fanilo beacon mamela ny mpivarotra hivezivezy tambajotra an'arivony amin'ireo fitaovana SecureCast sy Apple iBeacon amin'ny alàlan'ny interface iray.
mikoropadropaka anatin'ny Networks, Inc dia orinasa teknolojia izay manampy ny mpivarotra hampiasa ny herin'ny finday hisarika sy hitaona ny mpanjifa raha miantsena amin'ny fivarotana antsinjarany izy ireo. Ireo mpivarotra ambongadiny toa an'i Timberland, Kenneth Cole, ary Alex sy Ani dia mampiasa ny sehatry ny varotra finday Swirl sy ny haitao misy ny micro-location hiantohana mba hampitomboana ny fifamoivoizana sy ny fivadihan'ny mpivarotra ary ny fivadihan'ny varotra.
Tags: loharanomin-pivarotanamarketing amin'ny fivarotanamarketing any an-toeranaantsinjaranyvarotra antsinjaranymikoropadropaka anatin'ny